Mpanjaka George faha-II dia ny mpanapaka izay nametraka ny fomban-drazana ny fankalazana ny mpanjaka ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany ao 1748. Nanomboka tamin'izay, ny Fanjakana Mitambatra dia nankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany ny mpanjaka. Na izany aza, efa niova ny daty fotoana vitsivitsy. Ankehitriny, dia mankalaza Queen's Tsingerintaona ofisialy amin'ny asabotsy faharoa ny volana jona. Raha toa ianao ka ao Angletera nandritra izany fotoana izany, mety hahita ny Mpanjakavavy ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i ny Matso. Ny lanonana dia fantatra ihany koa ho toy ny Trooping ny Loko.
Italiana hankalaza ny fetin'ny Repoblika ny jona 2, izay ny fomban-drazana izy ireo nanomboka tamin'ny 1946. Ny fifidianana izay manohana ny abolishing ny fitondram-panjaka, Ny Italiana dia nanamboatra ny làlana ho an'ny Repoblikan'izy ireo. Na izany aza, dia nifindra ny fankalazana ny daty ny asabotsy voalohany amin'ny volana jona ao 1977. Izy ireo no miahiahy fa ny tany am-boalohany hita taratra daty ratsy eo amin'ny toe-karena. Izy ireo ihany no haverina amin'ny toerany taloha ny daty 2001. Misy be dia be ny fankalazana mba ho vavolombelona manerana an'i Italia tamin'ny fetin'ny Repoblika ny. Ny fahitana mahavariana indrindra dia ny flyover an'ny Tafika an'habakabaka italianina.